အမေ့လျော့ခံ အများပြည်သူပိုင်နေရာများ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အမေ့လျော့ခံ အများပြည်သူပိုင်နေရာများ…
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Dec 28, 2012 in Community & Society, Sports & Recreation | 15 comments
သမ္မတကြီး ၂၆.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့က ပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက ဟောဒီ အချက်ကလေးက ကျနော် ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို တွန်းအားပေးလာတယ်..။ အဘစိန်က ဒီလိုပြောလာတယ်..
နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်စဉ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး၊ ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံမှုနဲ့ လူမှုစီးပွားရေး တိုးတက်မှုတို့အတွက် ပြည်သူဗဟိုပြု လူမှုစီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒုတိယအဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် မူဝါဒ ချမှတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပေ၏။ သမ္မတကြီးက နိုင်ငံအများအံ့သြရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းကြီးကို ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ပြနေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ခေတ်နဲ့ဆီလျှော်ပြီး၊ ပြည်သူများ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်များ၊ ပြည်သူများအပါအဝင် သဘောထား အကြံဥာဏ်များ ရယူခဲ့ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ကြတာလည်းမှန်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှာ အရေးပါတဲ့ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဖြေလျှော့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့လို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တသည်းသည်း ဝင်လာပြီး အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းတွေ၊ စက်မှုဇုန်နဲ့ စက်ရုံစုစီမံကိန်းတွေနဲ့. မြို့ပြကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းတွေလည်း အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့လက်ထက်မှာ ပိုပြီးထင်သာမြင်သာရှိလာ၊ အများသဘောဆန္ဒကို ဆန်းစစ်လက်ခံပေးခဲ့တဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆိုင်းငံ့ပေးခဲ့တာ တာထွက်ကောင်းတဲ့ ဥပမာ တစ်ခုပေါ့။ ဒေသအလိုက် လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရန်တို့အတွက် ပြည်သူတွေကို ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးတာတွေလည်း လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ မီးမလင်းလို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားက မီးစက်ကြီးတွေ အရေးတကြီးမှာပြီး မောင်းပေးခဲ့တဲ့အထိပါပဲ (အလိုလိုက်ခဲ့တုန်းကပေါ့) ဒါပေမယ့်..
ဒါပေမယ့်လို့.. မေးငေါ့စရာတွေလည်း ရှိနေသေးရဲ့။ ဒေသအနှံ့အမြားမှာ စီမံကိန်းဗန်းပြပြီး မြေအသိမ်းခံရလို့ လယ်သမားတွေ လယ်လက်မဲ့ ဖြစ်ကြရတာ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ လုပ်တဲ့ စီမံကိန်းတချို့မှာ ဒေသခံတွေနဲ့ မပြေမလည် ဖြစ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့ ကျန်နေသေးသလို၊ လတ်တလော ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေမှာ လူမြင်ကွင်းမှာ ပေါ်တင်ဝင်ဆွဲတာ၊ တိတ်တိတ် ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေတုန်းပါပဲ။ လက်ပံတောင်းတောင်ဖြစ်စဉ်မှာ အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့လို့ သံဃာတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ မှားမိပါတယ်လို့ နှစ်ခါပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရတာ ရုပ်အဆိုးဆုံးပေါ့ဗျာ။
ကဲ နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေက ရှုပ်ထွေးလွန်းလှသလို၊ ဖြေရှင်းဖို့လည်း ခက်ခဲ အချိန်ယူရတယ်။ ဆိုတော့ အသေးအမွှားမို့ လျစ်လျူရှုခံနေရတာ လူမသိသာတဲ့ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်က လက်လှမ်းမီတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ပြောချင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံမှုနဲ့ လူမှုစီးပွားရေး တိုးတက်မှုတို့အတွက် ပြည်သူဗဟိုပြု အတွေးလေးနဲ့ လိုက်တွေးကြည့်ပေးပါလား။
နေပြည်တော်ကြီးတည်ဖို့ ဆွဲထားတဲ့ မာစတာပလန်မှာ ရပ်ကွက်တစ်ခု၊ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ အားကစားကွင်း၊ ဈေးတစ်ခု၊ အပန်းဖြေစရာ သင့်တော်ရာနေရာတိုင်းမှာ ပန်းခြံတွေနဲ့ ဆေးရုံ၊ ရပ်ကွက်ဆေးပေးခန်းတွေနဲ့ အသေအချာ ရေးဆွဲ တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် လက်ရှိနေတဲ့ ကံ့ကော်အိမ်ယာက ဈေးကလေးဟာဖြင့် နီးနီးနားနား၊ အသေးအဖွဲလိုရင် လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရုံ၊ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လကျော်ကစလို့ အဲဒီ ရပ်ကွက်ဈေးလေးကို ပိတ်လိုက်ပြီး ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ဖို့ ရောင်းလိုက်သတဲ့။ ကျနော်တို့ ညနေခင်း လမ်းလျှောက်စရာ၊ ဟင်းချက်စရာ အသေးအမွှား နီးနီးနားနား ပြေးဝယ်စရာ ဈေးလေး ဘဝပြောင်းသွားပါတယ်။ ဈေးသူ ဈေးသားတွေလည်း ဘယ်ဆီ ပြောင်းပေးရတယ်မသိ၊ လျော်ကြေးဘယ်လောက်ရတယ်မသိ၊ ကျေနပ်လို့ ပြောင်းပေးသလား၊ ကြောက်လို့ပဲ နှုတ်ပိတ် ဖယ်ပြေးခဲ့ရသလား မသိ.. ဘာအသံမှတော့ မထွက်ဘဲ ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ စတိုးဆိုင်ကြီးဖွင့်ဖို့လား၊ အဆင့်မြင့် စားသောက်ဆိုင်/တီးရှော့ဖွင့်ဖို့များလား အလန်းစား ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေပါပြီ။
ဘဝပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ နေပြည်တော် ကံ့ကော်အိမ်ယာဈေးကလေး
မြို့တော်ကြီး သာယာလှပစေရမည် (ပန်းခြံ အမှတ်-၁)
မြို့တော်ကြီး သန့်ရှင်းသာယာ လှပရမည်
မြို့တော်ကြီး အမြန်ဖွံ့ဖြိုး စည်ပင်တိုးတက်စေရမည်
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိတဲ့ မြို့ကြီးငယ်မဟူ လူမြင်ကွင်းမှာ ထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ မြို့နေ လူထုရဲ့ အိုးအိမ်၊ သောက်သုံးရေ၊ လမ်းတံတား သွားလာရေး၊ စွန့်ပစ်တဲ့ အမှိုက်ကအစ ချေး၊ သေး အဆုံး တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ အဖွဲအစည်းပေါ့။ လူထု ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ အနားယူဖို့ အပန်းဖြေဖို့ ဟောသလို ဥယျာဉ်တွေ ပန်းခြံနေရာတွေကိုလည်း လှပစိမ်းလန်းအောင် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးကြရပါသေးတယ်။
နေပြည်တော်ရေပန်းဥယျာဉ်လို ပန်းခြံတွေဟာ ခမ်းခမ်းနားနား၊ ကြည့်ရှုစရာ အပြင်အဆင်မျိုးစုံနဲ့ လုပ်ထားလျှင် အခကြေးငွေယူပြီး စည်ပင်ရဲ့ ဝင်ငွေရလမ်းတစ်ခုပါ။ ဒီဓာတ်ပုံထဲက ပန်းခြံလေးဆိုရင် ကျောက်စိမ်းခန်းမကြီးရဲ့ ဘေး၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်ကားလမ်းဘေး လူစည်ကားသွားလာရာလည်းဖြစ်၊ အစိုးရ လူကြီးမင်းတွေ ဖြတ်သန်းသွားလာရာလည်းဖြစ်တာမို့ အခကြေးငွေမယူသော်လည်း စိမ်းလန်းလှပ သာယာလှတယ်။ ကျနော်တို့မိသားစု ရံခါ သွားရောက် စိတ်အပန်းဖြေရာ၊ မျက်ခင်းပြင်ကျယ်မှာ သားလေးရဲ့ ပြေးလွှားကစား ခုန်ပေါက်ပျော်ရွှင်စရာ နေရာတစ်ခုပါ။
သာယာလှပ မိသားစု အပန်းဖြေရာ
အထက်က ပန်းခြံလေးနဲ့မတူ အိမ်ကြို၊ အိမ်ကြား လမ်းမြှောင်နားက ဟောဒီ မြေကွက်လေး အဖြစ်ကရော..။ နေ့စဉ် ဖွံ့တိုးတက်နေပါတဲ့ နေပြည်တော် စီမံကိန်းထဲမှာ ကံဇာတာမွဲလို့ သဲဖုတ်ထူဘဝက မတက်တော့တာလား။ လူမမြင်ကွယ်ရာမို့ လျစ်လျူရှုတာလား၊ အစိုးရမင်းတို့ ငဲ့မကြည့်မယ့် နေရာမှာ ရောက်နေလို့လား..။ ကိုယ်ကလည်း ဝန်ထမ်းလုပ်နေသူ ဆိုတော့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန် ထောင်းရသလိုပါပဲ။
လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု ထိရောက်အောင်မြင်ဖို့အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားရဲ့ စီမံလုပ်ကိုင်မှု ထိရောက်ထက်မြက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လို့ ဘကြီးစိန် ထုတ်ပြောသလို ဝန်ကြီးကအစ စာရေးစာချီအဆင့်ထိ ပြည်သူ့အကျိုးကြည့်ပြီး ထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်မှု အားနည်းနေတုန်းပဲဗျ။
ပိုင်သူ ဆိုင်သူ မရှိလို့ရယ်လည်းမဟုတ်။ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာပိုင်မြေ.. မကျူးကျော်ရတဲ့.. ဆိုင်းဘုတ်ကြီးလည်း အထင်းသား။ အများပြည်သူပိုင် မဟုတ်နော်။ စည်ပင်ပိုင်တာမို့ သူတို့လုပ်ချင်မှလုပ်မယ်၊ မကြည့်အားလို့ ပစ်ထားမိတယ်။ ဂရုစိုက်မယ့်သူရှိရင် ထိုသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို လက်လွှဲပေးမယ်လို့ စီစဉ်ထားလေမလား။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီနိုင်ငံနေသူ ပြည်သူအများကမပိုင်ဘဲ စစ်တပ်ပိုင်မြေ၊ ဌာနပိုင်မြေ၊ စည်ပင်ပိုင်မြေ..ဦးတို့ပိုင်တဲ့မြေ.. စီမံကိန်းမြေတွေကိစ္စတွေက အဖြေထုတ်ရမလွယ်တဲ့ အရှုပ်ထုပ်ကြီးတွေ များနေတာ ခက်သေးတယ်။
ဟောဒီလို အဖြစ်မျိုးလည်း ရှိသေးတယ်.. လုံးဝ လှည့်မကြည့်ဘဲ ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ အပင်လေးတွေ စုံစုံလင်လင် စိုက်ထား.. ရေပန်းလေးတွေ ထည့်ထားလို့ ကလေးတွေ ဆော့ကစားစရာတွေနဲ့ လုပ်ပေးထားတဲ့ ပန်းခြံတွေလည်း ရှိသပေါ့။
ဟောသလို.. ဟောသလိုလေ.. :harr: ။
မိုးကြိုးပစ်ရဇေရဲ့ ပန်းခြံအလည်မှာ ရေပန်းတွေနဲ့။ Sea-saw တွေ၊ ဒန်းတွေ၊ လျှောစီး ဆော့ကစားစရာတွေနဲ့ တကယ်ပါ။ ပြုပြင်မွန်းမံမှု နည်းတာကြောင့်ရော..၊ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေ စည်းကမ်းမရှိတာကြောင့်ရော ပျက်စီးယိုယွင်းလို့။ အမူးသမားတွေ ကမြင်းသွားတဲ့ ပုလင်းကွဲစတွေ၊ လူတကာ ပစ်သွားတဲ့ အမှိုက်တွေလည်း ပွယောင်းလို့ဗျာ။
ပန်းခြံအလယ်က ရေပန်းပါဆို.. မယုံဘူးလား…
ဂဂျားမှာဘဲ ဂဂျားမှာဘဲ … တားတားကို လာမတားနဲ့
စကားလုံးတွေ ရှာမတွေ့တော့လို့ နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်လို့ပဲ ပြောမယ်ဗျာ..။ ကျိန် မပြောတော့ဘူး.. ဓာတ်ပုံနဲ့ပြလိုက်တယ်။
သုခသိဒ္ဒိရပ်ကွက် အများပြည်သူ အနားယူစရာ ပန်းခြံနေရာ
မြွေထွက်ကိုက်မှာ ကြောက်ရတယ် ဒန်းကလေးရယ်
ကိုနိုဇိုမိ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် ဖြတ်သန်းရတဲ့ ထိုင်းက ပန်းခြံလေး တစ်ခုအကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ပို့စ်တင်ပြီး သူတို့ဆီက အများပြည်သူပိုင်နေရာ၊ အပန်းဖြေ အနားယူစရာကို ဘယ်လောက်ဂရုတစိုက် ရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပြလာတော့
ကျနော် နေပြည်တော်က ပန်းခြံတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ကိုနိုနောက်လိုက်ဦးမယ်လို့ ပြောထားခဲ့တာ
ခုမှပဲ အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်တော့တယ်..
ပြည်သူဗဟိုပြု အတွေးလေးနဲ့ လိုက်တွေးကြည့်ကြပါတော့..
သမ္မတကြိးက မေ့နေရင် တာဝန်သိတဲ့ပြည်သူတွေက ကိုယ်စားရိတ်နဲ့ကိုယ်ပြင်ကြရအောင်ဗျာ
မကြာမကြာလိုက်ရတဲ့ လုပ်အားပေး.. တွေနဲ့တင် အားမရလို့
ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စိုက်ပြီး ပြင်ရအုံးမယ်လား.. လေးပေါက်ရဲ့ အဟင့်
ဪ အပန်းဖြေစရာ လှပသော ပန်းခြံ။
ဟိုးတုန်းက ပန်းခြံကစားကွင်းက လျှော မှာ ဘလိတ်ဓားညှပ်သတဲ့ဗျာ။ အဲဒါ နယ်ဆေးရုံလေး ရောက်လာတော့ အိမ်ကသိပြီး ကျနော်တို့ဖြင့် အပြင်ကစားခွင့် ပိတ်ဖူးသေးတယ်။
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကလည်း အဲလိုကြားဖူးပါတယ်
ဘလိတ်ထားထောင်လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ညံ့တဲ့သူ မရှိလောက်ဘူး ထင်မိပါရဲ့..
ဖြစ်နိုင်တာက လျှောစီးတဲ့ အခင်းကို သံပြားနဲ့ လုပ်ထားမယ်၊ သံပြားက အပေါက်အပြဲ ဖြစ်သွားမယ်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလည်း မလုပ်ကြ၊ ဆော့တဲ့သူကလည်း မကြည့်ဘဲ လျှောဆင်းရင်းက သံပြားရှသွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
တလောကပဲ ရန်ကုန်မှာ ရေလွှာလျှောစီး အခင်းသံပြားကြောင့် ထိခိုက်ကြသေး မဟုတ်လား
ကိုမင်းနံဒါ ဖော်ပြပေးတဲ့ ပန်းခြံလေး ကြည့်လိုက်ရမှ
ကျုပ်ကြားထားတဲ့ သတင်းက အဲ့ဒီပန်းခြံကို ကန္တာရ ကစားကွင်း
သားတွေနဲ့အတူ ဆော့ရအောင် လိုက်ပို့မယ်
ရန်ကုန်မှာ ပြည်သူပိုင်နေရာတွေ ပျောက်ကုန်သလို မြေနေရာအကျယ်ကြီးကျန်တဲ့ နယ်တွေမှာလည်း ပြည်သူမပိုင်တွေချည်းပါပဲလား။
ဆက်ပြီးပျောက်မသွားအောင် ပစ်လိုက်တဲ့ ခဲတစ်လုံးတွက် ဘရာကြော်ပါ။
ပြည်မြို့မှာတောင် ပြည်သူပိုင်တဲ့နေရာ ကျန်သေးရဲ့လား မသိပေါင်ဗျာ
အကောင်ကြီးပြီး ခဲက သေးနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းကျောက်ပွဲမှာလဲ ကျောက်သမားတွေခဗျာ လာမော ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ရွာစားရေ
မှတ်ပုံတင်ကြေး၈သောင်းသွင်းပြီး ရောက်ပြန်တွေ နဲတာမဟုတ်ဘူး
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ကန္နားက လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ကွင်းမှာ လူကြီးတွေရော ကလေးတွေပါ ညနေစောင်းဆိုရင် ဆော့ကြ ကစားကြတာ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
ခုတော့လည်း အဲဒီကွင်းက ခြုံပုတ်တွေနဲ့ အသွားအလာတောင် မရှိတော့ဘူး။
ကလေးတွေလည်း ကစားကြတာ မတွေ့ဘူး။
ကြည့်ရတာ ကလေးတွေက တီဗွီဂိမ်းဆော့နေတာနဲ့တင် ပြေးခုန်ပစ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားတွေကို မလုပ်ကြတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။
တန်ဘိုးကိုသိဖို့တန်ဘိုးထားတတ်ဖို့အလေ့အကျင့်ရှိရမယ် စိတ်ဓါတ်မြင့်မားမှ လူနေမှုမြင့်မားမယ်
အညံ့ကျောက်ရောင်းပွဲကို ပြောတာလား.. ရောက်လာခဲ့သေးလား..
ကျောက်ပွဲတွေမှာ ရောင်းချရတဲ့ငွေပဲ ကြေငြာကြတယ်.. ဝင်ကြေးရတာကို ထည့်တွက်မပြကြဘူးနော်
မြို့တိုင်း နယ်တိုင်းက ဥယျာဉ် ပန်းခြံ ကစားကွင်းနေရာတိုင်း (ပိုက်ဆံဝင်တဲ့ဟာ မဟုတ်ရင်) အဲဒီအတိုင်းချည်း ပစ်စလက်ခတ်ပါပဲ မမရယ်.. စောင့်ရှောရမယ့်သူကလည်း ဂရုတစိုက် စည်ပင်အောင်မလုပ်၊ မသာယာတော့ လူမလာ၊ အဲလို လူတွေ စိတ်မဝင်စား ပစ်ထားတာကြာတော့ အကုန်ပျက်စီး.. လုံးခြာလည် ရိုက်လို့.. ဟူး ..
ခုလို စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားနေအောင် လုပ်ထားတဲ့သူတွေ အောင်မြင်သွားတာများလားပဲဗျာ..
လူနေမှုမြင့်မားဖို့ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားရမယ်၊ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားဖို့ အသိပညာဥာဏ် မြင့်မားရမယ်၊ အသိဥာဏ်ပညာမြင့်မားဖို့…. ..အင်း.. နောက် ဘယ်နှစ်နှစ် ပြုပြင်ယူရအုံး မလဲနော်
ဗမာပြည်မှာ ပန်းခြံဆိုရင် ၀င်ကြေးပေးရတဲ့နေရာကလွဲလို့
ကျန်အခမဲ့ ပန်းခြံတွေများ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတယ်လို့ မတွေ့ရသလောက်ပါဗျာ။
ခြွင်းချက်ကိတ်စတေကတော့ ရှိနေတုန်းဘဲမို့ မပြောချင်တော့ပါဝူး။
ပို့စ်အတွက်တော့ Bravo (well done/ကောင်းလှောင့်တေး ကောင်းလှောင့်တေး) ပါ။
လူကြီး မျက်စိကျမည့်နေရာ ပိုက်ဆံဝင်မည့်နေရာ မဟုတ်ပါက…
ဖုတ်လေသည့်ငပိ ရှိသည်ဟု မထင်ဆိုတာ… အဲဒီနေရာတွေ ပြောတာ..